हरिप्रसादलाई हतकडी - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७२ असार १९ गते १३:०८ मा प्रकाशित
असार १५ अर्थात धान दिवसको दिन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले जुन हर्कत प्रस्तुत गरे । त्यसले मन्त्रीप्रतिको सदाशयतामै कालोमैलो लगाइदियो । हरि पराजुली आबद्ध पार्टी एमालेलाई पनि बेइज्जतिको भारी बोकायो । गल्ती त हरि एक्लोले गरेका थिए । त्यसको प्रभाव राजनीतिक दल, सरकार र देशमा पा¥यो । उनको घिनलाग्दो व्यवहारले उनको मात्र होइन्, नेपालकै बेइज्जत हुन पुग्यो । फेसबुकका भित्ताहरु उनकै गालीले भरिए, उनको बिरोधमा नाराबाजी भए, पुत्ला जलाइए । अन्ततः उनी कालो मुख लगाउँदै सिंहदरवारबाट बाहिरिन बााध्य भए ।
उनले महिलामाथि झम्टिँदै अश्लिल व्यवहार प्रदर्शन गरेको जुन भिडियो सार्वजनिक भयो, त्यो भिडियो हेर्दा आफैलाई लाज लागेर आउँछ । जो नागिरकको संरक्षक र भविश्य दाताको पदभार ग्रहण गरेर बसेको छ, उसैले नागरिकको भविष्यमा ग्रहण लगाइदिने काम गरेको छ । पराजुलीको घिनलाग्दो हर्कतसँगै मन्त्री पदको गरिमा नै सस्तो भएको छ । हरि प्रकरणले अर्को प्रश्न जन्माएको छ, ‘के राजनीतिक दलहरुले साँच्चिकै जनताको सेवकलाई मन्त्री बनाउन् या आफ्नालाई ?’
उनको क्रियाकलाप हेर्दा उनी रक्सीले मातेका झैँ देखिन्थे । सेनालाई बडीगार्ड बनाएर खेतमा हिलो खेल्न पसेका उनी कुनै खलनायक झैँ देखिएका थिए, जसले महिला देख्नासाथ झम्टिहाल्थे । उनले रक्सी खाएका थिए कि थिएनन् ? त्यसको पनि छानबिन गरिनुपर्छ ।
यस्ता नेता मन्त्रीको कुर्चीमा बसिरहनुको औचित्य थिएन । नेपाली जनता र मिडियाको नैतिक दबाबसँगै उनी कुर्सीबाट बाहिरिए पनि । तर, उनले राजीनामा दिए पनि हरि प्रकरणको अन्त्य हुन सक्दैन । उनको राजीनामासँगै यो प्रकरण सेलायो भने देशमा सयौँ हरिहरु जन्मन सक्छन् ।
लेखिकाः निरा दुलाल
हिलो खेल्ने निहुँमा मन्त्री जसरी नेपाली चेली र महिलाहरुमाथि झम्टिए, यो क्रियाकलापले महिलाको आत्मस्वाभिमान माथि ठेस पुगेको छ ।
विषेश त नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरुले कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्नुपर्ने देखिन्छ । यदि उनलाई कानुन अगाडि उभ्याउन सकिएन भने, पुरानो उखान, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’को फेरि एकपटक चरितार्थ हुनेछ । र, यसले अर्को अपराध जन्माउनेछ ।
यस्तो व्यवहार गर्नेलाई कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुव्र्यवहार सम्बन्धी ऐन २०७१ अनुसार मुद्दा लाग्छ । यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको कानूनी प्राबधान छ । उनलाई जसरी पनि कानुनको दायरामा उभ्याउनै पर्छ ।
आज हरि प्रसादको ठाउँमा कोही सर्वसाधरण भएको भए उसको हालत के हुन्थ्यो होला ? केही समय अघि बागबजारमा प्रहरीले कुटपिटको दृष्य हेरेको थिएँ । एक जनालाई दर्जन प्रहरीले मान्छे नै होइन कि जसरी कुटपिट गरेका थिए । कारण, उसले मदिरा सेवन गरेर प्रहरीलाई नै झपारेछ । यो भन्दा ठूलो अपराध होइन र हरि पराजुलीको ?
नेपालमा धेरै गल्ती गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाए वा दिइयो । जसको जहाँ बोलवाला छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार बसेको छ, हाम्रो देशमा । यो संस्कारको अन्त्य हरि पराजुलीबाटै हुनु पर्छ । यो संस्कार तोड्नका निम्ति नेपाली जनतानै सशक्त हुनु पर्दछ । यदि जनता शसक्त भए भने जस्तालाई पनि धुलो चटाउने हैसियत राख्छन् । जसरी मिडियाले हरिप्रसादलाई हिलो चटायो । उनको पदलाई धुलो चटायो ।